“Axmed Wuxuu Leeyahay Waan Talinayaa Oo Caafimaad Qabaa, Isagaa Wiilka Uu Soddoga U Yahay Safiir U Magacaabay Waxba Yaynaan Dad Kale Xagxagan” | FooreNews
Home Aragtida Dadweynaha “Axmed Wuxuu Leeyahay Waan Talinayaa Oo Caafimaad Qabaa, Isagaa Wiilka Uu Soddoga U Yahay Safiir U Magacaabay Waxba Yaynaan Dad Kale Xagxagan”
“Axmed Wuxuu Leeyahay Waan Talinayaa Oo Caafimaad Qabaa, Isagaa Wiilka Uu Soddoga U Yahay Safiir U Magacaabay Waxba Yaynaan Dad Kale Xagxagan”
“Innaga Oo Madaxtooyadii Ka Eed Sheeganaynay Ayayba Madaxtooyo Kale Innagu Abuureen, Muddo Kordhin Siyaasadeed Diyaar Uma Nihin”…. Muj. Boobe Yuusuf Ducaale
Hargeysa (Foore)- Xoghayaha Warfaafinta xisbiga Mucaaridka ah ee WADDANI Md. Cabdiraxmaan Yuusuf Ducaale (Boobe) ayaa ka hadlay aragtida xisbiga Mucaaridka ah ee WADDANI ee ahaa hadalkii xukuumadda ee ku aaddanaa heshiiskii xisbiyada iyo go’aankii guurtida, halka uu sidoo kale sheegay in Madaxweynuhu ku dhaqmayo wixii uu shalay diiddanaa ee ahaa xad gudubka iyo darjiidhka nidaamka dalka u yaalla isaga oo doonaya in uu kursiga ku sii negaado. Boobe Yuusuf Ducaale waxa kale uu uu ka hadlay aragtidiisa ku aaddan magacaabista madaxweyne Siilaanyo wiil uu soddog u yahay u magacaabay safiirka Imaaraadka iyo waliba sida uu u arko aragtiyaha ku doodaya in talada dalka Madaxweynaha lala wadaago isaga oo qodobkaasi ku tilmaamay mid aan u shafeeco qaaday madaxweynaha oo isaga lagula xisaabtami doono taariikhdana ay u gali doonto wixii uu dalkaa ka gaystay shantii sano ee uu talada joogay.
Boobe Yuusuf Ducaale, Xoghayaha Warfaafinta xisbiga WADDANI waxa uu sidan ku sheegay waraysi uu shalay qaar ka mid ah warbaahinta ku siiyey caasimadda Hargeysa, isaga oo ugu horrayn ka hadlaya heshiiskii xisbiga KULMIYE kaga baxay waxa uu yidhi: “Heshiiska cidda ka baxday waa xukuumadda oo waa la wada arkayaa. Heshiiska waxa wada galay saddexda xisbi qaran waxaana saxeexay Madaxweyne ku xigeenka Somaliland. Anigu goobta maan joogin balse sida dad looga qaateen ahi noo sheegeen habeenkaa niman Wasiirro ah iyo Madaxweyne ku xigeenku waabay dhaarteen, waxaanay ku dhaarteen in heshiiskaasi sida uu yahay ay u fulinayaan. Waxa laba arrimood ah oo aan sinaba isku qaadan Karin, go’aankii Guurtida waanu taageersanahay iyo heshiiskii xisbiyada boqolkiiba boqol waanu taageersanahay. Labadaasi isma qaban karaan. Madaxweyne ku xigeenku waxa uu ku doodayay oo uu shalay lahaa xisbiyada mucaaridku way degdegayaane heshiiskii waanu fulinaynaa ee hana yar sugaan. 27-kii May illaa 27 June waa muddo bil ah dhawr cishona ku dar, horta intaaba waa la sugayay. Wuxuu leeyahay Guurtida intaanu qancinayno yaan nalaga degdegin. Waa bil Soon, Guurtidu waxa ay leedahay wax alla wax ka jiraa waxaa Mucaaridku shubayaan ma jirto, madaxweyne ku xigeenkuna wuxu leeyahay na yar suga, markaa taasi waxa ay ku tusaysaa in aanay waxba meesha jirin. Guurtidu waa hay’ad dastuuri ah balse wax walba waddankan kama aha. Guurtidu ma xukunto komishanka doorashooyinka”.
Xoghayaha Warfaafinta xisbiga WADDANI Muj. Boobe Yuusuf Ducaale oo wax laga waydiiyey waxa uu ka odhanayo warqadda la sheegay in WADDANI beesha caalamka u diray ayaa waxa uu kaga jawaabay sidan: “Arrinta ku saabsan warqadda uu qoray Xoghayaha Arrimaha Dibadda Xisbiga WADDANI ee uu dibadda u qoray, xeer iyo xaqba waanu u leenahay in aanu qorno. Annagu waxaanu ku doodaynaa heshiiskii saddexda xisbi wada gaadheen oo ah arrin daakhili ah oo maxali ah, waa arrin ka timid dad reer Somalilad ah oo dalka wanaag la doonaya. Madaxweyne Siilaanyo markii uu tartamayay 2009 waxa uu xilka ku yimid heshiis 6 qodob ka koobnaa oo beesha caalamku halkan muddo u joogtay oo lagu dhexdhexaadiyey Mucaaridkii wakhtigaa iyo Rayaale. Taasi miyaanu fool xumo u arkayn hadduu tan foolxumo u arkayo. Beeshii caalamku waxa ay leedahay maanta waar wixii aad ku heshiiseen fuliya. Mushkiladda meesha taallaa waxa weeyi waan iska sii fadhiyayayaa iyada oo aan dan iyo dal toona laga taliyey”.
Boobe Yuusug Ducaale oo ka hadlayay safiirrada Madaxweyne Siilaanyo habeen hore magacaabay waxa uu yidhi: “Iyada oo qaddiyaddii Somaliland-ba maanta halis ku jirto waad arkayseen safiirro la magaacabayay. Wakhti aan Hargeysa iyo Muqdisho la kala garanayn oo qaddiyaddii halis ku jirto oo ay eeddaa leedahay xukuumadda maanta taagani ayaa lagu leeyahay safiirbaa Dubai loo magacaabay iyo midbaa Shiine loo magacaabay iyada oo aan Afrika cidi innaga joogin, Koonfur Afrika cidi innaga joogin oo aan South Sudan cidi innaga joogin”.
“Madaxweynuhu waxa uu doonayaa muddo kordhin loo sameeyo waayo haddii aanu rabin wwuu ka hadli lahaa oo wuu iska diidi lahaa. Innaga oo Madaxtooyadii ka eed sheeganaynay ayayba madaxtooyo kale innagu abuureen. Bal u fiirso Ina Warancaddehan leh cidbaanu jiidhaynaa, yuu jiidhi karaa. Sawkii Daahir Rayaale shalay ka sheekaynayay maaha. Xukuumaddan waxa la doortay shan sano oo way dhammaysatay. Xeerbuu adeer dalkani leeyahay. Waxaanu diyaar u nahay muddo kordhin farsamo ee diyaar uma nihin muddo kordhin siyaasadeed. Mid kursiga la macaansado oo la iska sii fadhiyo diyaar uma nihin” ayuu yidhi Boobe Yuusuf Ducaale.
Xoghayaha Warfaafinta WADDANI waxa uu sheegay in aan cid kale eed la saarin oo aan lagu dawakhin ee arrinta dalkan uu masuul ka yahay Madaxweyne Siilaanyo oo loo doortay shan sano. “Axmed (Madaxweynaha) wuu nool yahay isagaa xilka haya, wuxuu leeyahay ma buko oo waan caafimaad qabaa, intuu intaa leeyahay waxba yaan cid kale lagu meeraysan oo la qabsan isagaa magacaabay safiirka uu soddoga u yahay. Waxba dad kale yaynaan xagxagan. Shan sano ayuu dalkan joogay Axmed Siilaanyo, iyada oo uu Ilaahay wax walba qaddarkeeda leeyahay haddana wixii wanaag iyo xumaan dalkaa ka dhacay shantaa sano waxay saran yihiin madaxa Axmed Siilaanyo. Horena waanu u sheegnay waxaa uu mutay shantaa sano ayuu taariikhda ku galayaa, fallaadhi gilgilasho kaagama go’do waxba yaan cid kale lagu meeraysan” ayuu hadalkiisa ku soo xidhay Boobe Yuusuf Ducaale, Xoghayaha warfaafinta WADDANI.
Previous PostShilkii Baabuur Ee Ugu Yaabka Badnaa Dunidda Oo Ka Dhacay Magaalada DURBAN We Waddanka Koonfurta Afrika. Next PostAl-shabaab Oo Soo Bandhigtay Hub Culus Iyo Saanad Militari Oo Ay Ka Furteen Xeradii Ay Ku Xasuuqeen Ciidanka Burundi